Fanafodin’ny IMRA manampy ny hery fiarovana • AoRaha
Fanafodin’ny IMRA manampy ny hery fiarovana
Nikaroka fanafody hiadiana amin’ny aretina « Coronavirus » ny avy ao “Institut d’Hygiène de Recherches Appliqués” na IMRA. Nahita fanafody iray azo avy amin’ny zavamaniry hahahafana miady amin’io aretina io ry zareo. Natambatra ny singa rehetra tamin’ireo karazana fanafody momba ny gripa ka nanome ny vovo-panafody antsoina hoe “Aro tsimoka aretina” na ATA.
“ Nandray fanapahan-kevitra izahay rehefa hita ny fiainan’ity tsimok’aretina “Covid-19” ity. Tahaka ny gripa ny “Coronavirus”, saingy mahery eo amin’ny fifindrany. Efa nisy fanafody karazany maro momba ny gripa tato aminay. Nojerena ny tao anatin’ireo fanafody ireo, izay efa nampiasaina ho an’ny marary teto Madagasikara, ka nakambana mba hiarovana amin’ny aretina. Telopolo taona no efa nampiasana an’ireo fanafody ireo, izay mbola tsy nahitana voka-dratsiny teo amin’ny vatan’olombelona”, hoy Andrianjara Charles, tale jeneralin’ny IMRA.
Notsindriany fa efa voasedra ara-tsiantifika ny fanafody. Fanatanjahana ny hery fiarovana ihany ny ATA fa tsy mamono ny tsimok’aretina. Misy fonosana efatra ao anatin’ny fonosana lehibe iray. Manomboka anio no hita eny amin’ny farmasia sy ireo mpivarotra ny fanafody vokarin’ny IMRA ity fanafody ity. Natao ho takatry ny fanjifan’ny rehetra ny sarany.